Trump oo weli ku adkaysanaya in aan FBI-du baadhitaan ku hayn - BBC News Somali
Image caption Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump
Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa carrabka ku adkeeyey in aan wax baadhitaan ahi ku soconin, waxaanu dhaliisha loogu soo jeediyey xilka qaadistii agaasimaha FBI-da ee uu shaqada ka fadhiisiyey ku tilmaamay mid ay kuwa dhaliilayaa dadka isku tusayaan.
Waraysi uu Trump siiyey Telefishanka NBC ayuu ku sheegay in uu keligii go'aan ku gaadhay in uu xilka ka qaado James Comey.
Comey wuxu waday baadhitaan lagu hayey eedaymo la sheegay in Ruushku si u faro geliyey doorashadii Maraykanka, suurto galna ay noqon karto in ay arintaa ka wada shaqayeen saraakiil ka tirsanaa xafiiskii ololaha Trump iyo Ruushku.
Trump baadhitaankaa ganafka ayuu ku dhuftay waxaanu ku tilmaamay eedahaa la sheegay kuwo aan sal iyo baar toona lahayn.
Waraysigan Trump siiyey Telefishanka NBC oo ah kii u horeeyey ee uu bixiyo tan iyo intii uu xilka ka qaaday agaasimihii FBI-da, ayaa wuxu ku sheegay in uu intii aanu xilka ka qaadin Comey waydiiyey in baadhitaan isaga lagu hayo iyo in kale waxaanu yidhi "waxaan ku idhi, ma ii sheegi kartaa in baadhitaan la igu hayo iyo in kale, waxaanu iigu jawaabay wax baadhitaan ah laguguma hayo".